Sebenzisa igqwetha elitsha lokuBhengeza abantu baseJersey ukuze likuncede ukuba unike ifayile yokubhanga ukuze ubone ukuba kutheni kukho i-95% yokuphumelela kwesahluko sokuchithwa kwebhanki engu-7- i-NJ & NY yearhente yeNdawo, uMfuna, uKhuselweyo
ikhaya / Blog / Ukuchithwa / Sebenzisa igqwetha elitsha lokuBhengeza imali kwi-Jersey ukuze likuncede ukuba unike ifayile yokubhanga ukuze ubone ukuba kutheni kukho impumelelo ye-95% kwisahluko se7
Ukuba ucinga ngokufayilisha i-bankruptcy ukuba ungathetha nge-New J ersey Ukutshutshiswa kwamagqwetha simahla kuqala.
Amaxesha amaninzi abantu baneengxaki kwaye bacinga ukuba ukungabinamali kunokuba yimpendulo yabo. Thetha nomnye wethu NJ Ukubhengezwa kwezinto ezifunxayo Isimahla ngaphambi kokugcwaliswa. Sineeofisi kwiJersey City naseNew York. Sinokuphendula uninzi lwemibuzo yakho ngomnxeba ositsalelayo kuthi I-844-533-3367 eyi (844) 5- DEFENSE. Silapha ukukunceda ukhusele amalungelo akho.
Ukuba ufuna ukuzama ukufayilisha Isahluko 13 ukubhengezwa njengawe ngokwakho, iNkundla yaseNew York yokuNgabinamali inesikhokelo sabasebenzi abanamatyala. Ngaphambi kokuba uzame, uqonde ukuba i-1 ekwi-3 yokuchithwa kwebhanki iyaphumelela ngokutsho Iziko laseMelika lokuGcina imali. Eli xabiso lempumelelo le33% libonakala lahluke kakhulu kumlinganiso I-95% izinga lokuphumelela kweSahluko 7 sokungabinamali ezigciniweyo.
Umahluko phakathi kwenqanaba le-33% lokungaphumeleli kweSahluko 13 Ukuchithwa kwexabiso kunye ne-95% izinga lokuphumelela kweSahluko 7 Ukuchithwa kwemali kulula ukuchaza….
Umahluko phakathi kwenqanaba le-33% lokungaphumeleli kweSahluko 13 Ukuchithwa kwemali kunye ne95% izinga lokuphumelela kweSahluko 7 Ukuchithwa kwemali kulula ukuchaza xa ubunzima besahluko se-13 sokungabhenywa kwezicelo kunye nezizathu zokufaka ifayile ye-13 xa kuthelekiswa nokugcwaliswa kwesahluko se-7. ihlolwe. Ngamanye amaxesha ukufakwa kokubhanga kweSahluko 7 kunokuhamba ngokuchasene noko kufakwa ngumntu ozama ukufezekisa.
Makhe sijonge umzekelo ukuze sibone indlela isahluko 7 esinokumenza buhlungu ngayo umntu. Yitsho abantu babini abanamakhaya e3 kwaye bayawa emva kwenye yerente yabo yokuqeshisa, kodwa okwangoku kwindawo abahlala kuyo kunye nakwenye ipropathi. Ukuba banokulingana kumakhaya abo asisiseko, kodwa bancinci kakhulu ekulinganiseni kwizindlu zabo eziqeshisayo kwaye babhengeza ukubhengezwa kweSahluko 7, amakhaya anolingano anokutsalwa kwibhanki yokuthengiswa ukuba athengiselwe ukuhlawula amatyala amanye amakhaya. Esi sesinye sezizathu zokuba abanye abantu babeke iipropathi zabo kwii-LLCs ukukhusela utyalomali lwabo ukuba olunye ugcinomali luya kumuncu.
Kule meko ingentla, abantu banokuthi babalasele ekugcwaliseni iCandelo 13 lokuBhanga. Ngoku ukuba sicinga ngenqanaba le-33% lempumelelo, kuya kufuneka sijonge ukuba yeyiphi eyona nto Impumelelo yokubhanga. Amaxesha amaninzi abathengi beza kwifemu yethu kuba ikhaya labo sele liza kuthengiswa kwintengiso yesherifu. Siya kuthi emva koko sifayilishe ukubhengezwa kweSahluko 13 sokumisa ukuthengiswa kwesherifu ukuba banemali yokwenza icebo lokuhlawula ukonga iipropathi zabo. Ukugcwaliswa kokuchithwa kwamatyala kuya kumisa ukuthengiswa kwesherifu eNew Jersey. Ukugcwaliswa kwe a Isahluko 7 okanye iSahluko 13 ukubhengezwa kwamatyala kuya kuyeka NJ intengiso yesherifu. Nje ukuba kufakwe imali ebhengeziweyo, siya kwazisa isebe elingumgcini sheriff ukuqinisekisa ukuba ipropathi ikhutshiwe kwintengiso yesherifu.
Nje ukuba ukubhengezwa kufakwe kumatyala okubhanga kwi-13, sihlala sicela ukucutha ilahleko kunye nombolekisi ukuba enze amalungiselelo okuba ahlawule imali etyunjiweyo okanye alungiselele ixesha lokuthengisa umzi. Ngamanye amaxesha, abantu bakhetha ukuhlawula onke amatyala abo kwisithuba sexesha le-3 okanye le-5 kwaye baphephe ilahleko ekunciphiseni kwabo bababolekayo. Xa begqibe ukuhlawula ngaphezulu kwe3 ukuya kwixesha le-5 unyaka wokungabinamali unokuthathwa njengempumelelo. Ukuba ukuncitshiswa kwelahleko kucwangciswe ngebhanki, ke amaxesha amaninzi ukungabinamali kunqunyanyisiwe kwaye kuchithwe. Nokuba umntu ogcwalise ingxelo wayifumana kanye le nto bayifunayo (Balondoloze ikhaya labo, kwaye isicwangciso esitsha sokuhlawula okanye bafumana nexesha lokuthengisa ikhaya labo) ukubhengezwa njengongenamali kungadweliswa njengokugxothwa kwaye kungagqitywa ngempumelelo.
Ke ngamanye amaxesha ukungaphumeleli kwesahluko 13 empeleni kuyimpumelelo.
Ngenxa yoku kuntsokotha, sinika abantu thethwano lwezomthetho simahla ngaphambi kokubathumela ukuba babeke iifayile zokungabinamali. Ngokwenyani sifuna abantu basixelele izizathu zabo zokugcwalisa ukubhengezwa ngaphambi kokuba sisebenze nabo. Ngamanye amaxesha abantu abafuni ukufaka ifayile kubhengezo, kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba abantu bayaziqonda zonke iinketho zabo ngaphambi kokufaka iifayile. Ngamanye amaxesha isisombululo sisobala kwaye sincoko elifutshane kakhulu. Njengam ndine- $ 200,000 kwityala lezonyango kwaye ndenza i- $ 50,000 ngonyaka kwaye ungabi nepropathi. Kule meko ukufayilisha kwe-7 yokubhanga kubonakala kubonakala ngokucacileyo.
Siya kuphakamisa iinketho ezikhe zikusebenzele. Ukuba ufuna ixesha, singakufumana ixesha elingakumbi lokulwa ukuze usindise ikhaya lakho. Ukuba ufuna ukuphuma phantsi kwamakhadi okuthenga ngetyala awusenakukwazi ukuhlawula sinokunceda. Ukuba ukhe wafumana ingozi eguqula ubomi bakho kwaye awusakwazi ukuhlawula imali mboleko yakho yomfundi, unokubanakho ukukhutshwa kukubhengezwa njengongenamali.
Ukuba uhamba kumaxesha anzima, kubalulekile ukuba uthethe negqwetha elinokukunceda uqonde ukhetho lwakho ngeli xesha linzima. Nxibelelana nathi namhlanje, kwaye siza kudlula zonke iinketho zakho. Nxibelelana nathi kwi (844) 5 - DEFENSE - (844) 533-3367 okanye usithumele nge-imeyile ku [Imeyile ikhuselwe]
Ukuba ujonge ukuthatha ikhosi yokucebisa ngetyala ngaphambi kokuba ubhengezwe, sincoma abathengi bethu ukuba basebenzise ukuCebisa ngetyala ngeNgxamiseko. Njengenxalenye yemirhumo esiyibizayo, sibandakanya ezi zifundo zibini njengenxalenye yomgcini esiyibizayo.
Kwikhosi yesibini sibacela ukuba basebenzise iSolidStart:
Ukuqonda ukuba yintoni kwi Hudson County New Jersey ehleliweyo yokuThengisa kweSheriff